Petro I 2 NA-TWI - Onyankopɔn ankasa nkurɔfo - Montwe mo - Bible Gateway
Petro I 1Petro I 3
Petro I 2 Nkwa Asem (NA-TWI)
2 Montwe mo ho mfi bɔne nyinaa, atoro anaa nyaatwom anaa anibere anaa oburu kasa ho. 2 Monyɛ sɛ nkokoaa a bere biara sukɔm de mo sɛ mubenya honhom mu nufusu kronn anom na sɛ monom a, moanyin na wɔagye mo nkwa. 3 Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Moaka Awurade ayamye no ahwɛ.” 4 Mommra Awurade a ɔyɛ ɔbo a nkwa wom no nkyɛn. Ɔno na nnipa poo no, na Onyankopɔn yii no sɛ n’ade a ɛsom bo.